Imfazwe yeZiyobisi ityhila into engapheliyo - Umculo
Imfazwe yeZiyobisi ityhila into engapheliyo
U-Adam Granduciel wayesebenzisa i-1,300-square-foot-foot yeklasi yangaphambili yesayensi kwisikolo saseMzantsi Philadelphia esathi saphinda sasetyenziswa kwisakhiwo esixubeneyo. Ngaphambi koko wayehlala kwaye esebenza kwindlu ewohlokileyo enemigangatho emithathu kwingingqi yedolophu yaseKensington ekwabelwana ngayo neqela elitshintshayo labantu ahlala nabo kunye nengqokelela yeekati. Kwezi zithuba, iqela lakhe iMfazwe kwiZiyobisi linokuthi lidibanise kwaye lizame njengoko, ngokungalindelekanga, laba lelinye lamaqela amakhulu, ahlonitshwayo e-rock e-United States. Kodwa sele kulithuba uGranduciel ehlala ePhiladelphia.
Ngo-2015, wafudukela eLos Angeles, kwaye akuzange kube ngo-Matshi odlulileyo apho wafumana indawo eBurbank apho wagqiba ekubeni inokuba yindawo efanelekileyo yokujika ibe likomkhulu elitsha. Ukuqala, waqesha le mvumi-umchweli awayeyazi ukuba apeyinte isakhiwo aze afake umoya womoya. Kwiiveki ezintathu emva koko, waqonda ukuba lo mfo wayezimisele ukudiliza yonke ingaphakathi. UGranduciel wazifumana sele ephakathi kwindawo yokulungiswa kwendawo awayengayilungiselelanga. Emva koko umsebenzi waqhubeka kangangeenyanga. Andikwazi nokuthetha ngayo ngaphandle kokuba uxinzelelo lwegazi lunyuke, utshilo uGranduciel, ejonge kwiifestile zesakhiwo esingaphambili.
I-LA izaliswe zizitudiyo zokurekhoda ezifana ne-EastWest, i-United, i-Sunset Sound, i-Sound City, kunye ne-Vox esanda kuvalwa. UGranduciel, oneminyaka engama-42, ungene iiyure ezininzi ngaphakathi kuninzi lwabo. Kuye, elinye lamakhubalo okuhlala eSouthern California ngawo onke amagcisa esikolo esidala asakhabayo. Ube ngumhlobo noCharlie Bolois, owaziwa ngokuba ngumlungiseleli we-Studer tape oomatshini kunye nokwakha izitudiyo zasekhaya zeentsomi ezifana noTom Petty noJeff Lynne emva kwemini. Ndiyayithanda nje loo nto malunga ne-LA, kufana, awunakuze ungabinabo ubuchwephesha, utshilo uGranduciel. Ke ewe, ndifumana indoda enye engazange isebenze kwistudiyo esidlalayo ebomini bakhe. Ibuyela ngasemva. Yakhelwe ngqo kwisikhululo seenqwelomoya. Kodwa uza kwenza ntoni?
Indawo yaseBurbank ekugqibeleni iyasebenziseka, kodwa ayisebenzi ngokupheleleyo. Okwangoku igcwele iiragi ezimibalabala kunye neetapestries, amatyala enqwelomoya amakhulu abhalwe ngegama leqela lakhe, kunye nefreyim ye-REM ipowusta esuka koo-1980. Ekugqibeleni, uGranduciel unethemba lokuyisebenzisa ukubhala kunye nokudiliza umculo omtsha. Kwangoko ngolu suku lukaSeptemba, umntu osebenza ngombane ulungiselele yonke into malunga nokufika kwabantu abangaphezu kweshumi elinesibini ababeza kubhabha ukuze baqalise ukulungiselela ukukhutshwa kwecwecwe lesihlanu lesitudiyo seMfazwe kwiZiyobisi, Andisahlali Apha , kunye nokhenketho olulandelayo. Irekhodi liqoqo lokuqala leqela leengoma ezintsha ukususela ngo-2017 Ukuqonda Okunzulu . Eli cwecwe, lelokuqala leqela kwiiRekhodi zeAtlantiki, waphula phezulu 10 kwi Ibhodi yezaziso Itshathi engama-200 kwaye iphumelele iGrammy ye-albhamu eBalaseleyo yeRock, ebetha iintshukumo eziquka iMetallica kunye neQueens of the Stone Age.
Ababethi be-buzzer be-damian lillard
Njengomsebenzi wangaphambili weMfazwe kwiZiyobisi, Andisahlali Apha yakhiwe ngentlonipho kumzuzu omenyezelayo wexesha elidlulileyo le-rock 'n' roll ngelixa lihlala lincinci ukujikeleza imiphetho. Ukuhamba kwexesha bekusoloko kunomdla kuGranuciel, kwaye Andisahlali Apha uziva egxininise ngakumbi ekukhumbuleni, ekubuyeni, nasekucingeni emva kwinto ebikade iyiyo. Okanye ngokuchanekileyo, ivakalelwa kukuba igxininisekile ekukhumbuleni ubudlelwane obungalunganga, ukubuyela kumaxesha alahlekileyo, kunye nokucinga malunga nendlela yonke into ephela ngayo kwaye ekugqibeleni singabonakali kwabo basenze ukuba singobani. IMfazwe kwiZiyobisi igxile kwi-nostalgia emfiliba. Ngaba uGranduciel uyacula malunga namashumi eminyaka eyadlulayo? Kunyaka ophelile? Kwinyanga ephelile? Ayicacanga. Eyona nto ibalulekileyo ziintliziyo ezibuhlungu kunye neenguqu ekufuneka uhambe kuzo ukuze ube ngumntu omtsha. Nangona kukho amagama athile uGranduciel ahlala ebuyela kuwo kumazwi akhe ( umlambo , imvula , intlungu ), eyona ibalulekileyo isenokuba utshintsho .
Ibhendi irekhode kakhulu Andisahlali Apha , ngaphandle ngoLwesihlanu, kwizitudiyo zobuchwephesha eLos Angeles naseNew York ngaphambi kobhubhane. Kwanangaphambi kokuba kutshixiwe, izinto zihlala zisiba nzima kuba amalungu amathandathu akhoyo esasazeke kwilizwe liphela. Granduciel kunye saxophonist John Natchez bahlala L.A. San Fernando Valley; umculi we-bassist uDave Hartley, owayekunye noGranduciel phantse ukususela ekuqaleni kwebhendi kwi-2005, e-Asheville, North Carolina; umdlali wesiginkci uAnthony LaMarca useYoungstown, eOhio; uCharlie Hall wahlala ePhiladelphia; ngelixa umdlali wekhibhodi uRobbie Bennett eseMzantsi Jersey.
Olu luhlu lwangoku lwaqina malunga ne-2014 ngexesha lokhenketho lwe-albhamu yokuphuma Ulahlekile Ephupheni , kodwa iGranduciel ibisoloko iliziko lomxhuzulane leMfazwe yeZiyobisi. Nangona kunjalo, akakhangeli ukuba amaqabane akhe eqela enze nje umbono wakhe. Ngelixa ekugqibeleni iyinto ka-Adam, kwisitudiyo yimvakalelo entle yokusebenzisana, utshilo uLaMarca. Ukuba uAdam uthe uze kudlala kwirekhodi, akayi kufana nokuthi, ‘Nantsi le nxalenye, nantsi into endifuna uyenze.’ Kudla ngokuthi, ‘Phola, hamba uyokwenza into yakho.’ Ufuna ukuba wenze into kuphela. ungenza.
ULaMarca uzichaza njengonendima yenkxaso kwiqela kwaye uthi akakhohlisi ukuba kufanele abe yindoda ekrazula isiginkci eyedwa eqongeni. Onke amanye amalungu agcina ezawo amaqela okanye iinzame ezinxulumene nomculo. Oko kuthethiweyo, ukuba kwiMfazwe yeZiyobisi kube nefuthe kwezi projekthi zahlukeneyo. Uchitha ixesha elaneleyo udlala nabani na, iimvakalelo zabo zomculo ziyakuchaphazela, utshilo uLaMarca. Andingomntu othanda ngokwendalo, 'Jika i-amp yonke indlela ukuya phezulu,' kodwa rhoqo emva kwexesha ndifana, 'Hayi, vula i-amp. zonke indlela ephezulu. Bona okwenzekayo.’ Yinto endiyifumene ku-Adam leyo, mhlawumbi makhe ziwe kancinane amavili uze ubone ukuba loo nto ikusa phi na.
Ukwahlukaniswa ngakumbi ngexesha lo bhubhani, amalungu eMfazwe yeZiyobisi anokusebenza kwimathiriyeli eyedwa kwizitudiyo zabo zasekhaya ezahlukeneyo. Kukho into emayithethiwe ngokuthumela into emntwini kwaye ibanike ixesha lokuphonononga ingoma bebodwa, utshilo uGranduciel. Yintoni engcono, ukuba nomntu obhabhe ngaphandle kwaye ube nemizuzu engama-20 yokudlala into phambi kwe-microphone ye-20,000 yeedola okanye umthumelele into kwaye umnike iveki ukuba ayidlale phambi kwe-microphone ye-100 yeedola?
Intlonipho enkulu uGraduciel anayo kwezo zitudiyo zakudala kunye neealbham zakudala ezenziwe ngaphakathi kuzo, ukwacinga ukuba zinemida ngaphandle kweendleko zokubhukisha. Ngamanye amaxesha uya kwiindawo ezinkulu kwaye zikulungele ukuhlalisa abantu abathandathu, abasixhenxe ngexesha, utsho. Ii-headphones zomntu wonke zisebenza kwaye ii-mics ziyasebenza kwaye unokurekhoda amajelo angama-60 ngexesha elinye, kodwa ayisiyiyo eyona ilungileyo, njengokuhamba okunzulu.
Kukuhamba kunzulu, imvakalelo yokuba uGranduciel ngokwakhe ufumana kunzima ukuyichaza, ayikhangelayo xa erekhoda iialbham. Nangona uye wafumana udumo kule minyaka idlulileyo njenge studio obsessive, akanguye umntu ogqibeleleyo. Akayi kubeka umdlali kumakhulu okuthatha ukuze afumane into ayivayo entloko emzimbeni womnye umntu, kwaye ngamanye amaxesha uya kugqiba ukusebenzisa amazwi akhe okuqala engoma, nasemva kokuwarekhoda amaxesha amaninzi. . Ukuthanda kwakhe kukufumana amathuba obugcisa: ukuphonononga zonke iithowuni kunye nokuvula kunye nokuvala umnyango ngamnye. Yinkqubo enokuthi ingapheli yokutyhila. Mhlawumbi uGranduciel wachaza ngokungahambi kakuhle indlela yakhe kumgca osuka kuThatha iFama, ingoma yeqela le-2008 yokuqala: ukumba iidayimane ezantsi kolwandle.
Waziwa ngeyakhe, njengokungathi, iingoma zokuqhuba iingoma zikatata-rock kunye nesolos yakhe yesiginci kunye nemifanekiso yendlela nezinto ezinjalo, kodwa amandla akhe okwenene akhethekileyo yinkqubo yakhe kunye nokulahlwa kokwenyani kwemigaqo, utshilo uBen Swanson, umseki weCanadian eyimfihlo, iBloomington, Ileyibhile esekwe e-Indiana ekhuphe ii-albhamu ezintathu zokuqala zeMfazwe kwiZiyobisi.
UGranduciel wafumana i-coconspirator eShawn Everett, owaxuba Ukuqonda Okunzulu kwaye ungumvelisi kaGranduciel Andisahlali Apha . U-Granduciel wamfuna emva kokufunda malunga neendlela ezigqithisileyo zestudiyo u-Everett uthi wasebenzisa njengenjineli kwicwecwe lika-Alabama Shakes lika-2015. Isandi & Umbala , nto leyo eyabangela ukuba uEverett afumane iGrammy. U-Everett wayesele engumlandeli weMfazwe kwiZiyobisi ngaphambi kokuba bobabini badibane isidlo sakusasa kwaye uthi usacinga ngo-2014. Amehlo abomvu enye yeengoma ezilungileyo kakhulu zerock kwiminyaka engama-30 edlulileyo.
Ngaphandle kokuhloniphana, bobabini babelana ngendlela yefilosofi ekwenzeni umculo. Kukho inani elingenasiphelo leembono ezixhonywe ngeenxa zonke emhlabeni, utshilo u-Everett. Ukuze siyicuthe phantsi ibe yingcinga enye ekufuneka uhlale kuyo luhlobo oluthile lwe-bummer. Zininzi iindlela esinokupheka ngazo oku. Ukuba sizame ama-30 okanye ama-40 kuwo, mhlawumbi singafumana into enomtsalane ngokwenyani ngokuchasene nokuba, nje, ilungile.
Ukuzama ukucacisa ukuba usukelo lwakhe lokuhamba okunzulu luzibonakalisa njani, uGranduciel uchaza inkqubo yokwenza i-Old Skin, ingoma ekwicwecwe elitsha elidubula lisuka kwi-ballad eyophukileyo ukuya kwifowuni edelelayo yokuhlaziya. Bendiyithanda le ngoma, kodwa bendisazi ukuba inguqulelo ebesihamba ngayo, ibingathi iyadika, utshilo. Ndenze idemo ekuqaleni kwaloo nyaka, kwaye yayivakala njengoYesu noMary Chain. Bekupholile ngenene. Bekukrwada ngenene. Wayenenyama yebhendi kwaye wayeqinisekile ukuba kukho into ekhoyo, wayefuna nje ukufumana indlela yokuvula imilinganiselo engaziwayo ngaphakathi kwayo. Ebudeni belo xesha, basebenza kumagubu awayehamba kuyo isithuba esingangonyaka. Kwathi ngenye imini, yena noEverett babekwiStudio B kwiSound City, kwigumbi elinye apho uNeil Young wayenzela khona Emva kweGolide Rush . Babeka i-Old Skin kwi-console enkulu yokuxuba kwaye baqala ukuthulisa iinxalenye, besusa yonke into uGranuciel angayithandi ngayo, eyona nto yayiyinto yonke. Emva koko kwabonakala kuye ilungiselelo elililo. Wongeza ipiyano kwaye akazange abe namagubu akhatywayo kude kube phakathi, kwaye iingcamango zeza kuye ngokukhawuleza de ingoma ngokukhawuleza yafika kwifomu yayo yokugqibela.
UGranduciel uyavuma ukuba inokuba luhlobo lokoyisa ukulahla izinto abachithe ixesha elininzi besebenza kuzo, kodwa uyaqonda ukuba kubalulekile kwinkqubo yakhe yokufumanisa ukuyila. UEverett uthelekisa indlela yabo yokwenza izinto noko kwenziwa zizazi ngeenkwenkwezi. Unokuchitha lonke ixesha lomsebenzi wakho ujonge i-intshi enye esibhakabhakeni kwaye uya kuba ufumana izinto ngonaphakade, utshilo. Ndive [ Andisahlali Apha ] yayiyinto encinci enjalo. Makhe sijonge lo mnyele nangakumbi. Kwaye ngeli xesha, sifumene iiplanethi okanye enye into.
UGranduciel wakhulela eDover, Massachusetts, idolophu efumileyo esentshona yeBoston. Ifani kaGranuciel’ nguGranofsky; igama lakhe leqonga elamkelekileyo livela kwinguqulelo eyenziwa ngutitshala wakhe wesiFrentshi njengeqhula, eqhekeza iisilabhili zayo: Gran-of-sky to Gran-du-ciel. Kwisikolo samabanga aphakamileyo, waphumelela kwi-Roxbuy Latin ekufuphi, iziko labucala, eliphantse libe li-400 leminyaka ubudala elisebenza njengesondlo kwii-Ivy Leagues kwaye noyise wayekho. UGranduciel wasokola ezifundweni kwaye wachitha iiyure kwigumbi lakhe ezifundisa ukudlala ikatala. Waya eDickinson, ikholeji encinci ye-liberal art ePennsylvania, apho wafunda ngembali yobugcisa kwaye wahlakulela uthando lokufota, ngakumbi iiPolaroids. Kodwa kwanemisebenzi yaseofisini ekunokwenzeka ukuba yayivulelwe yena ayizange ibonakale inomtsalane. Ukuba ubugcisa apho ndisuka khona eMassachusetts, mhlawumbi uya kwintengiso, utsho.
Emva kwekholeji, wayehlala e-Oakland unyaka wonke ngaphandle kwesicwangciso esikhulu ngaphambi kokuya ePhiladelphia. Kumenzi omkhulu wombhoxo kunye nomthengisi weeNtsomi eziLukiweyo, wayesebenza iifowuni imini yonke, ethengisa ihoseyile. Emva koko wafumana umsebenzi kwiYunivesithi City Housing, inkampani real estate egxile ekurenteni kunye nokugcina off-campus iinketho abafundi. Ekupheleni konyaka wesikolo wayedla ngokutya iibhayisekile, P.A. iinkqubo, nazo zonke iintlobo zezinto abaqeshi abazishiya ngasemva. Okubaluleke ngakumbi, waqala ukwenza ubuhlobo nezinye iimvumi ezikhaba ejikeleze isixeko. Wasondelana noKurt Vile, omnye umbhali wengoma oneenwele ezinde onendlela eyahlukileyo yokudlala isiginci kunye noxabiso ngeebhatyi zedenim. U-Granduciel waba lilungu leqela lakhe, i-Violators, kunye noVile badlala kwasekuqaleni, bevela kuluhlu lweMfazwe yeZiyobisi. Kuba imiboniso ingaba band epheleleyo, okanye nje Granduciel kunye Vile kunye sampler, okanye bobabini kubo, sampler, kunye Hartley banging kwi tom emgangathweni.
Nangona yayibonakala ingenathemba kwaye ingenathemba kubantu bangaphandle, uGranduciel waziva ngathi uphila ubomi awayefuna ukubuphila. Bendijonge kuzo zonke ezi hard drives zindala, njengefowuni yangaphambili, ukubona ukuba zingaphi iifoto zedijithali ezigciniweyo, utshilo. Mhlawumbi ndine, njenge, iifoto ezingama-50 phakathi kuka-2003 no-2009. Zonke ezi foto bendizijongile, yimifanekiso yam noKurt edlala egumbini lam, okanye ukuseta kwethu ukurekhoda okuncinci, okanye sidlala umboniso eKhyber [ Dlula iPub] okanye into. Ndikhumbula nje ukuba ndonwabe kakhulu ukuba ndiyile. Kwakungekuko nokuba ndandidlala ndimncinci. Ndandiphakathi kwiminyaka engama-20. Ndandinembopheleleko nayo yonke into, kodwa ndandiqala ukuziva ngathi ndinobuchule.
Xa erekhoda iingoma zakhe iiArms ezifana neBoulders kunye nokuThatha iFama kwisitudiyo somhlobo, kwakungekho ngenjongo yokusayinwa, wayefuna nje ukuba namava okurekhoda iingoma azibhalileyo. Uxela ukuba wayengenalwazi malunga neelebhile zerekhodi kunye nenkcubeko ye-indie ngokubanzi. Ngendingazi nokuba ndiyabathumela kubani ukuba ndiyafuna, utshilo uGranduciel.
UJason McNeely, osebenza naye e-UCH, wayesazi. Ilungu lebhendi Windsor yeDerby , ebeka umculo kwi-Secret Canadian, wadlulisela iMfazwe kumculo weziyobisi kuBen Swanson. Ingqokelela emfutshane, eyathi kamva yakhululwa njenge Umphanda weebhetri I-EP, yenza intshulube kwindlela yayo yokujikeleza rhoqo kwi-stereo yemoto kaSwanson. Ngandlela-thile [uGranduciel] wayencinci, okanye mhlawumbi eninzi, ebhakiweyo, kodwa wabonisa izithembiso ezininzi, uSwanson uthi. Ngokusebenzisa i-fuzz wawunokubona ngokuthe ngqo ukuba ubheka ngaphi na. Yayindivuyisa ngokwenene loo nto.
Phambi kokukhululwa kwecwecwe leqela likaJuni ngo-2008, Wagonwheel Blues , I-Swanson yatshisa iikopi ze-CD-R ze-200 kwaye yadlulisa kubagqugquzeli bekhonsathi kunye nabanye abantu awayecinga ukuba banokuyamkela ngexesha laloo ntwasahlobo yaseMazantsi ngenkomfa yomculo yaseMzantsi-ntshona. Andizange ndiyenze loo nto ngaphambili, kwaye andizange ndiyenze ukususela ngoko, utsho.
Wagonwheel Blues uqokelele abalandeli abambalwa abanomdla, kodwa ayizange ihoywe. USwanson ukhumbula ukuba emva kokuba iqela lidlale umboniso eBloomington ukuya esiphelweni somjikelo wokukhenketha wecwecwe, wayethetha noGranduciel ekhitshini lakhe. UGranduciel wayesenza iishifti kwivenkile ethengisa ikofu yomhlobo wakhe yaye wathi wayecinga ngamacebo ayenziwe ukuze athengiselwe le venkile. Waqhubeka nomculo kwaye wabhala i-2011's I-Ambient yekhoboka , i-albhamu yokuqala yeqela ukufumana indumiso egxekayo ethe yabalandela. Isiphelo sokwenza loo rekhodi kulapho yaqala khona ukuziva ngathi ayingomsebenzi, kodwa bendinomthwalo othe kratya kum wokuthatha isigqibo sokuba ndiza kuyithatha kangakanani na, utshilo uGranduciel.
Kwibali elijikelezileyo Ulahlekile Ephupheni , ukwenziwa kwecwecwe kuboniswa njengokungcungcuthekisayo. Kwi ibali le Ifolokhwe ukusukela ngelo xesha, kukho iinkcazo zamaxesha apho uGranduciel wayephantse wancama, engakwazi kushukuma ludakumba (athi kudala esilwa nalo), i-paranoia, kunye nokuhlaselwa luloyiko. Njengombonakaliso wemeko yakhe yeemvakalelo, ezi zizihloko zeengoma ze-albhamu ye-gerund: Ukuhlupheka, Ukunyamalala kunye nokutshiswa. Ngaphandle kobunzima bokurekhoda Ulahlekile Ephupheni , yayicace gca kumntu wonke ukuba yayilungile. Kuyadabukisa kodwa kunomphefumlo, kunye namaxesha okukhululwa kwe-cathartic, kwaye kwavakala ngathi uGranduciel ekugqibeleni wasibamba isandi ebesisukela. Ibhendi yajikeleza iminyaka emibini ukuyixhasa, ibuyela kwizixeko ezifanayo ukuya kudlala iindawo ezinkulu nezinkulu kutyelelo ngalunye. Ukuba besinexesha lokuphumla, kuye kwacingelwa ukuba, sukuthembela ekubeni uphumile, utshilo uLaMarca. Singabhukisha olunye ukhenketho, kuba sinako.
Ukuze kulandelelwe, Ukuqonda Okunzulu , Imfazwe yeZiyobisi esayinwe kunye neeRekhodi zeAtlantiki ngoSteve Ralbovsky, i-A&R eyaziwa ngomsebenzi wakhe ngezenzo ezibandakanya i-Strokes, Kings of Leon, kunye neJacket yam yasekuseni. Baza kuthanjiswa ngakumbi kushishino lomculo oluqhelekileyo (ngo-2015, uJimmy Iovine owaziwayo. uxelelwe Ibhodi yezaziso , [T] hey kufanele ukuba mkhulu). Kodwa abalandeli beli qela babengapheleli nje ekubambeleleni kwimitya yekatala yabo egugileyo. Uninzi lweengoma ezivela Ulahlekile Ephupheni kwaye Ukuqonda Okunzulu Yiba namanani ostrimisho kwimivo ezisibhozo. Nanjengoko i-Coachella kunye neminye iminyhadala yomculo yagxininisa amabhendi emveli, igama leMfazwe kwiZiyobisi liye laba likhulu kwiipowusta.
Ukwenziwa kwe Andisahlali Apha isenokuba ayizange ibe buhlungu okanye idodobalise njengemizamo yangaphambili, kodwa yayingekho ngaphandle kwemizabalazo yayo. Iingoma ezithile, ndihlala ndisukela into ethile, utshilo uGranduciel. Akukho namnye kubo oza lula.
Kubuhlungu, kodwa oko akuthethi ukuba akukho mnandi, u-Everett uthi malunga nenkqubo yeminyaka yokurekhoda icwecwe leMfazwe kwiZiyobisi. Ukuba uzama ukwenza into eniyithanda ngokwenene nobabini, inokuba luhlobo lwentlungu, kuba uzama ukwaphula into engayifuniyo ukuba yaphulwe. Ke uhlala uyibethelela, kwaye mhlawumbi loo nto inokukwenza uphambene, kodwa ukuba omabini amaqela akumbono wokuphambana kancinci ukuze ufumane into eza kuvuleka, kulungile, kuba nobabini iphepha elifanayo.
Ii-albhamu zeMfazwe kwiZiyobisi zihlala zithelekiswa nomculo weenkwenkwezi zerock ezisindileyo (kwaye ngubani wasinda basinda) oo-1970 benza kanye ukuba bafikelele kwi-'80s. Kwakuxa i-synths ingena kwaye i-sonics yajika i-crystalline. UBruce Springsteen, Dire Straits, Don Henley, kunye noTom Petty bahlala bevuswa. U-Granduciel wayengumntwana nje ngaloo minyaka ilishumi kwaye umculo wawungafane ube yinxalenye yobomi bakhe basekhaya. Andizange ndikhule nge-MTV, ngoko ndeva ezo ngoma zidlulayo, uthi. Andikhumbuli ndibukela iividiyo ngokuphindaphindiweyo. Ndiyakhumbula ndiwava kwi-ether, okanye enye into.
U-Granduciel akazange aphephe okanye abuyisele umva kolu thelekiso. Elona gama lihambelanayo elibotshelelwa kumculo wakhe nguBob Dylan, mhlawumbi ngenxa yokudinwa kwangaphambi kwendalo kwilizwi lakhe. Vula Andisahlali Apha 's ingoma yesihloko , Granduciel ungqiyama ngokupheleleyo kuthelekiso kwinqanaba lokuba Amatye agiqekayo wayibiza , Dylan fan-fiction. Ucaphula aze athethelele iingoma eziquka iShelter kwiNkanyamba kwaye Kulungile, Ma (Ndiyopha Kuphela) . Njengoko ekhumbula uthando olungaphumelelanga ude enze isalathiso esicacileyo kwi-weirdo endala ngokwakhe emigceni, Njengaxa sasisiya kubona uBob Dylan / Sadanisa kwi-'Desolation Row.' Iziyobisi lyric ngalo lonke ixesha, kuthathelwa ingqalelo ukuba Umqolo weNkangala yingoma yemizuzu eli-11 enevesi ezili-10 eziqala ngamagama athi, Bathengisa amakhadi okuposa ajingayo.)
UDylan waziwa ngokuphonononga okunokwenzeka ngaphakathi kweengoma zakhe, ehlala ezibuyisela kwakhona ngexesha leekhonsathi kangangokuba ngamanye amaxesha azibonakali kubalandeli. Imfazwe yeZiyobisi ayidli ngokutyhala imida yeengoma zabo kubume obuphilayo. Akunjalo ukuba uGranduciel khange acinge ngayo. Ngamanye amaxesha kukhenketho, sijonga isandi kwaye ndihlala ndizama ukwenza abafana bacinge ngaphandle kwebhokisi, utshilo. Ufuna ukuba babe liqela likaBob Dylan, kodwa inyani kukuba andazi ukuba ndingayithatha njani kwenye indawo.
I-imeyile (iyafuneka) Ngokubhalisa, uyavumelana nowethu Isaziso saBucala kunye nabasebenzisi baseYurophu bayavumelana nomgaqo-nkqubo wokudluliselwa kwedatha. Bhalisa
Ukwayaqonda ukuba abantu beza kwiikonsathi zeMfazwe kwiZiyobisi ezinolindelo olwahluke kakhulu. Dylan, akukho siginci siyedwa ofuna ukusiva, utshilo uGranduciel. Unokudlala 'uRow Desolation' ngeendlela ezisisigidi, ukuba nje ufumana umgca wakho, ukuba nje unokucula kunye nomthamo othile. Xa usiva edlala iharmonica, kufana nokuthi, ‘Owu, nanko lo mfo uyenzayo loo nto.’ Indlela abeza ngayo ukuza kusibona, ukuba ndidlala isolo elithi ‘Thinking of a Place’ okanye, njengesax kaJohn '[Amehlo] kuMoya,' bafuna ukukubona oko. Ipholile. Ndiyaphila ngaloo nto.
U-Granduciel waqala ukucinga kwakhona ukuba enze ukhenketho oluninzi emva kokuba iqabane lakhe, umdlali we-actress u-Krysten Ritter, wazala unyana wabo ehlotyeni lika-2019. Bamthiya igama elithi Bruce, ngokuyinxenye emva kwe-Springsteen, ngokuyinxenye kuba befuna igama ongeva kakhulu. kwakhona, kwaye ngokuyinxenye ngenxa yokuba wayelusana olukhulu. Bonke abongikazi babengathi, ‘Owu Nkosi yam, ugruzukile,’ utsho uGranduciel.
Uninzi lwe Andisahlali Apha iphenjelelwa yimvakalelo evela ekubeni nguyise omtsha kunye nombono oguqukayo kaGranduciel kubudlelwane bakhe notata wakhe, ngoku osekupheleni kweminyaka engama-80 kwaye wamkele umsebenzi womculo wonyana wakhe emva kwexesha elide engayiqondi. U-Granduciel wayengazi nokuba uyabathanda abantwana de abe naye ngokwakhe, kodwa ngoku ikhanyisa imbono yobomi eyayikade ingcwatywe ebumnyameni. Ukuba nesiseko esomeleleyo ngoku ebomini bam ngokuba nomntwana, akufani nokuba awunaxesha lokucinga, ngathi, uloyiko olukhoyo, kodwa alunabunzima, utshilo uGranduciel. Unayo le nto intle.
Kwindinyana yokuvala ethi Guqula kwicwecwe elitsha, uGranduciel uyacula, Mhlawumbi ndazalwa emva kwexesha kulo mlo wenkululeko wodwa/ Mhlawumbi ndazalwa ngendlela engafanelekanga/ Mhlawumbi ndazalwa ngosuku olungelulo. Nangona umculo wakhe uhlala uthelekiswa nezinto zakudala, uthi akaziva ngathi uphila kwixesha elingalunganga. Unikezela ukuba kukho imvakalelo yokufuduka ehamba kwezinye zeengoma zakhe, kodwa akaqinisekanga nokuba lelo ligama elilungileyo kulo. Umbono nje wokuziva wedwa kwaye mhlawumbi unomdla, utsho.
Ngoku ekubeni sele ekhulile, indoda enosapho kunye nemvumi ephumelele ngakumbi kunokuba wayenokucinga ngezo mini zakuqala ePhiladelphia, ngaba usaziva elilolo? Ngamanye amaxesha, kwaye ngamanye amaxesha hayi, uyaphendula. Uhamba ubomi bakho bonke ngaphandle kokuyicinga.
UEric Ducker ngumbhali kunye nomhleli eLos Angeles.
INethi sele zisibonile isitshixo sokuvula amandla esiThathu esikhulu
Ikamva lokulwa kweCage ngoku
Iholo likaLeonardo DiCaprio loDumo kwaye 'Musa ukukhangela phezulu' kunye noAdam McKay
Njani uhlaziyo lwe'Owatchwatch 'eDerailed yenye yawona maQela aBalaseleyo kwii-Esports
Inene iBatshit: Imbali eyimfihlo ye'Vampire's Kiss, 'iCraziest Nicolas Cage Movie yeXesha lonke
Isilayidi sikaDrake sikaToosie yiKlasi yeNgcaciso kwiNtengiso, kodwa akukho enye into
Ukurhoxiswa kwe-Urban Meyer
'Khwaza': Imbali yoMlomo
Iimfazwe ziSukela iMbali kwakhona-kuzo zonke izizathu ezingalunganga
I-Nuance yebali likaNahomi Osaka
Usetyenziso lwesiqendu ngasinye 'seMnyama Mirror'
Iingoma ezigqwesileyo zika-2019
'UMandalorian,' Isahluko 13 Ukuphindaphinda: Umntwana uYoda unegama-kwaye abalandeli banokuninzi okuza kwenziwa
IVenkile yokutya uJoe, iBachelor Glow-ups, kunye nezibini ezitsha ezivela 'kwiBachelor in Paradise'
IiPhillies Zisongelwa Ukuchitha Imali Esisidenge. Kodwa iMegadeal kaBryce Harper yiDamn Smart.
Ibali likaSaquon Barkley, laxelwa ngabaKhuseli abangama-26 abangaphumelelanga ukuMelana naye
'I-HQ Trivia' ngoku sesinye iNtengiso enkulu yeNative
'Amashumi amahlanu aMithunzi aKhululiweyo' kunye ne-Absurdist Comic isibheno seCampy Trilogy
UNick Foles Ubhala iQB Story yokuGcina ngokungafaniyo nayiphi na enye
Umthetho wesibini kaKenny Mayne
Ukuhamba Ngokupheleleyo Kunye Nojason Goff
Ukuxabisa uBukhulu bukaLamar Jackson, iiBhulu zineNgxaki enkulu, kunye neNgcoko kunye noVan Lathan kunye noRachel Lindsay
Akukho Kutsiba Ngejinx Kunye Neshea
Indlela yokuRekhoda kweRow Row, iVibe Magazine, kunye neentshaba ezenze 'All eyez kum' yaba yiClassic
Abaphumeleleyo kunye nabaLahlekileyo boKunyuka kwe-Skinny Bundle yeTV
UJeff Bezos ngoyena mntu unamandla kwiTeknoloji
Ubill Nunn Wayengaphezulu Kunoradio Raheem
Isibongozo 'kwiiMfazwe zeNkwenkwezi': Yeka ukuba yiNgcali
Iimfazwe zeenkukhu, 'uGordon Ramsay: Uncharted,' kunye nePopeyes Chicken Sandwich Review kunye noDanny Chau kunye noSean Yoo
Eyona Ndoda Ithembekileyo Kwezonyango?
Iringer Infl Bonisa
Iindaba ze-Urban Meyer, i-Rams Roller Coaster, kunye nemibuzo yakho ye-Mailbag
Inkwenkwezi eLutsha ijonge kwi-30
Ayisiyiyo ngokusesikweni ikholeji yeBhola ekhatywayo kude kube liLizwe laseOhio Lonakaliswe yiPurdue
Ukukhala kwi-NBA Xmas ngombuzo kuwo wonke uMdlalo
UKim Potter wafunyanwa enetyala kunye nesibini sokuqala esiNtsundu seSizwe
Isikhokelo sokugqibela seKholeji yeBhola eKhatywayo
Isikhokelo esiluncedo sokugcwalisa isibiyeli sakho seMad Mad
Wamkelekile kwiVeki kaNick
Iingoma eziPhambili zeDrake aziyiNgoma zikaDrake-Zizingoma ezingama-40
Ilifa likaHank Aaron's towering Lifa lodwa
uphambene amadoda ityesi
betha abantwana bayazibuza showzen
inyani tv iinduli
Imidlalo ye-trivia yamabhaso
umdlalo wetrone onamaxesha ashiyekileyo